मतदान गर्न गाउँ जानेको संख्या बढ्दै, कतिले छाडे काठमाडौं ? - Everest Dainik - News from Nepal
मतदान गर्न गाउँ जानेको संख्या बढ्दै, कतिले छाडे काठमाडौं ?
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य दिन आउन अब २ सदन मात्रै बाँकी छ । यहि ३० गते शुक्रबार देशभर एकैसाथ निर्वाचन हुँदैछ । मतदान गर्ने दिन नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यका छोड्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौँका मुख्य नाका कलंकी–नागढुंगा र कोटेश्वर – जडिबुटी सडकखण्डामा आज पनि उपत्यका छोड्नेको भीड उस्तै छ ।
गाउँ घर जाने तयारीमा रहेकाहरु बिहानै गाडी चढ्ने ठाउँमा पुगेका छन् । तर, उनीहरुलाई गाडी पाउन मुस्किल छ । गाडीको खोजीमा रहेका यात्रुको भिड सडकको छेउसम्मै छ ।
गाडी र यात्रुको चापका कारण कोटेश्वर जडिबुटी सडकखण्डमा आवागमन नै प्रभावित भएको छ । केही आफ्नै निजी गाडीमा जाँदै छन् भने केही गाडी रिजर्भ लिएर जाँदै छन् । यस्तै, केही मतदातालाई सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले गाडी पठाएका छन् ।
धेरैजसो गाडी रिजर्भमा जान थालेकाले यात्रुलाई गाडी पाउन समस्या छ । भोलि झन् समस्या हुन सक्ने भन्दै धेरै जना आजै गाउँ घर जाँदै छन् । यसले भिड थप बढाएको छ ।
टाढा जाने बस त भरिभराउ छँदैछन्, नजिकैको धादिङ, गोरखासम्म जाने सवारीमा समेत यात्रु अटेसमटेस छन् । कुरेर बसेकाहरुलाई गाडी पाउनै मुस्किल छ ।
तर, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुहरुको संख्या बढेको भएपनि गाडीहरु भने नर्मल अवस्थामै परिचालन भइरहेको बताउनुभएको छ । रिजर्भ जान खोज्नेका लागि व्यवस्थापन गरिएको स्वाँरको भनाइ छ । भोलिसम्म मात्रै यातायातका साधन चल्ने भएकोले केही मात्रामा चाप देखिएको स्वाँरले बताउनुभयो ।
जुन स्थानीय तहमा आफ्नो मतदाता नामावली छ त्यहीँबाट मात्रै भोट हाल्न पाइने भएकाले अरु बेला काठमाडौंमा बस्नेहरु भोट हाल्न गाउँ फर्किन लागेका हुन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीे महाशाखाका अनुसार तीन दिनमा एक लाख ५६ हजार बढी सर्वसाधारणले उपत्यका छाडिसकेका छन् । आज र भोली यो संख्या अझै बढ्न सक्ने महाशाखाको अनुमान छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार २५ गते ५५ हजार ७ सय ४०, २६ गते ५० हजार ९ सय ३० र २७ गते बिहान ७ बजेसम्म ५९ हजार ८१ जना सर्वसाधारणले उपत्यका छाडिसकेका छन् ।